Allgedo.com » Geesiyada u kacay gayigeena iyo gunaadkii gumeystaha
Gumayste iyo Daba dhilif waa jabeen waana lasoo afjaray. soomaaliyana waxaa soo noqday sharafkeedii dawladnimadeedii.waajib diiniyan ah weeye inaan dalkeena diinteena dadkeena difaacano ilaalino sharafka.waxaan gunaanadaynaa geeridii gumaystaha iyo dabadhilifkiisii.mudo dheer ayaan sugaynay FARMAAJO IYO KHAYRE rabise waa nookeenay. Ileen dal aan lahayn hogaan iyo ciidan dalmaha lamana orankaro. shacabku waa in ay qabsadaan shaqadooda wadaniyadeed oo ah inay soo sheegaan dabadhilifka qabiilka ka sheekaynaya shirinaya oo u soo sheegaan ciidamada amaanka qaranka soomaaliyeed. hotel iyo guri kasta oo koox dad ahi ku shirayso ama la arko iyagoo isla jooga dagdag haloo soo sheego maa daama ay jiraan munaafaq shisheeye lacagsiiyo oo isku dilaya dadkeena soomaaliyeed ee walaalaha ah isku diinta ah isku dadka ah ee aan lakala qaybinkarin. maanta dunidu waa ilbaxday cilmiguna waa faafay okiyaalahaad wax ku duubi kartaa, dharkaad wax ku duubi kartaa, qalinkaad wax ku duubi kartaa, saacadaad wax ku duubi kartaa, kabahaad wax ku duubi kartaa, taleefankaad wax ku duubi kartaa sidaa daraadeed waa in shacabku shaqeeyaa dalka ilaashadaa. wadanigu waa sidaa dalwalba.